Gumeysi - Wikipedia
Haku khaldin "Adoonsi"
Sanadkii 1541 wakhtigaasi oo ku beegan goortii gumeystuhu gaadhay xeebta Jili
Gumeysi (; ) waa siyaasada wadan ama dowlad ku qabsato maamulka deegaano kale oo ka baxsan xadkeeda halkaasi ooy ku dhaqan yihiin dad dhaqan, diin, hab-nololeed ka duwan leh. Si ka duwan adoonsiga, gumeysigu waa markaa maamul qabsado talada iyo maamulka deegaan kale halkaas ooy ka leeyihiin ujeedo dhaqaale, ganacsi, urursiga kheyraad dabiici ah iyo arimo kale oo badan.
2 Gumeysiga iyo Adoonsiga
Gumeysigu waa marka deegaan ay qabsadaan awood kale oo markaas wadata ujeedo u gaar ah. Sida qaalibka ah, gumeystuhu wuxuu sameeystaa nidaam iyo sharciyo u adeegaya danahiisa iyo hadafkiisa kuwaasi oo si xaqdaro ah u siiya faa'iido badan gumeystaha halka dadka deegaanka loogu yimid u baa'ba'aan macaluul, daranyo iyo dhibaato leh dhimasho taasi oo uu si toos ah ama si dadban u keenay gumeystuhu.
Gumeysiga iyo Adoonsiga
Adoonsi (; ) waa qof nool oo xoriyada ka qaadeen qof ama tiro dad ka awood badan, kuwaasi oo u isticmaalaya sida ay ayagu ku qanacsan yihiin.]], Adoonsi waxaa lagu sharaxaa "Marka qof loo isticmaalo in lagu shaqeeysto ayadoo wax faa'iido ah ugu jirin qofka la adoonsanayo; sidoo kale waa qof loola dhaqmayo sida wax la leeyahay oo kale, kaasi oo la iibin karo, la iibsan karo, la calaamadaysan karo, la xoogi karo, xataa la dili karo."
Inkastoo adoonsigu ka jiray aduunyada wakhti aad u dheer, gumeysigu wuxuu bilaabmey horaantii qarnigii 16aad wakhtigaasi oo wadano reer Yurub ah si badheedh ah ugu soo duuleen qaaradaha Afrika iyo Aasiya halkaasi ooy u kala qeeybsadeen gobolo iyo deegaano u gaar ah gumeystihii reer Yurub. Sidoo kale, gumeysigu wuxuu aduunyada ka jiray ilaa badhtamihii qarnigii 20aad oo wadana intooda ugu badan qaateen xornimada. Gumeystihii reer Yurub wuxuu masuul ka ahaa dhimashada dad badan iyo burburka maamulo badan oo ka talinayay deegaanada ay qabsadeen. Wadanada ugu darnaa ee gumeeysiga ugu balaadhan aduunka ku lahaa waxaa ugu horeeya Boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska.
Gumeystihii reer Yurub
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumeysi&oldid=169866"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Luuliyo 2017, marka ee eheed 19:41.